IP Change နည်း
Mandalay Fighter Group :: Your first category :: အင်တာနက်နှင့်အီမေး
Admin on Sun Jun 12, 2011 4:37 am
ကျွန်တော် IP Change လို့ရတဲ့ နည်းလေးကို ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမည်။တောင်းပန်ချင် တာကတော့ ဒီနည်းကို အသုံးချပြီ ဆိုဒ်တွေကို လိုက်ဆဲတာတို့ မဟုတ်မတန်ရာတွေ ရေးတာတွေကို ရှောင်ရှားပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော် တင်ပြပေးတယ်ဆိုတာကလဲ မိမိတို့ လုံခြုံရေး အတွက်ဘဲ သုံးဖို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတစ်ပါးကို ညစ်ပတ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ လုံခြုံရေးတစ်ခုထဲ အတွက် သုံးပေးကျပါရန် တောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ သိတဲ့ သူတွေ အတွက် Proxy scan နဲ့ လုပ်ရင်တော့ IP အမှန်ကို သိနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အားလုံးမလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ အခုတင်ပြမှာကတော့ FIREFOX PLUNIN လေးနဲ့ Software တစ်ခုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Software ကို ကျွန်တော်တို့ မိမိ သုံးတဲ့ OS လိုက် Download ချလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်မှုလဆိုဒ်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာက Windows 7, Vista, XP, 2000, 2003 Server အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
1. ပထမ အောက်ကဆိုဒ်ကနေ Troproject ကို Download ချပြီ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ( Stable နှင့် UnStable ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Download Stable ကိုသာ ချပါ။ ကျွန်တော်က UnStable ကို ချထားတာကို ပြထားပါတယ်။
2. အထက်ပါဆိုဒ်ကို Install လုပ်ပြီတာနဲ့ အောက်က TOR plugin ကို Firefox မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Firefox ကို Restart ချလိုက်ပါ။ ( Firefox Add On မလုပ်တက်တဲ့ သူများ Labels က Firefox Add On မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
3. အထက်ပါအဆင့်တွေ ပြုလုပ်ပြီးရင် အောက်မှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း မိမိ Firefox ရဲ့ ညာဘက်ထောင့်မှာ Tor Disabled ဆိုတာ တွေ့ရပါတယ် ။ မိမိက ဆိုဒ်တွေကို IP Change ပြီးဝင်ချင်ရင် Tor Disabled ကို Tor Enabled ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ရုံပါဘဲ။ (မှတ်ချက် ။ ၊၊ Net Speed အနည်းငယ်ကျသွားပါတယ်။) မိမိတို့ Site တစ်ခုကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။ မိမိ IP Change သွားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါဝင် တစ်ခါ IP က ချိန်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။